LA OGAADAY: Faah Faahin Dheeraad Ah Oo Ka Soo Baxday Sababtii Dhabta Ahayd Ee Uu Cristiano Ronaldo Uga Baxay Real Madrid Iyo Qaabkii Uu Ku Wajahay. - GOOL24.NET
LA OGAADAY: Faah Faahin Dheeraad Ah Oo Ka Soo Baxday Sababtii Dhabta Ahayd Ee Uu Cristiano Ronaldo Uga Baxay Real Madrid Iyo Qaabkii Uu Ku Wajahay.
Markii uu Cristiano Ronlado sida lama filaanka ah kaga baxay kooxdiisii hore ee Real Madrid waxaa jiray qodobo aad u badan oo sababta bixitaankiisa lagu salaynayay laakiin may jirin cid xog rasmi ah ka haysay sidii ay ku bilaabantay sheekadu iyo waliba qaabkii uu xidiga ree Portugal ku wajahay go’aankii uu Bernabeu kaga baxayay.
Wargayska El Mundo ee dalka Spain ka soo baxa isla markaana waqtiyo badan looga bartay in uu bixiyo siro kubbada cagta ah maadaama oo uu xidhiidh la leeyahay Fooball Leaks isla markaana uu xog badan ka helo maxkamadaha dalka Spain ayaa ugu danbayn faah faahin buuxda ka bixiyay qaabkii xaalada Ronaldo u dhacday.
Warbixina cusub ee wargayska El Mundo ayaa lagu soo bandhigay hadaladii iyo shirarkii uu Cristiano Ronaldo la galay lataliyaashiisa iyo qareenadiisa waxaana lagu soo bandhigay qaabkii cadhada wayni ku jirtay ee uu xalaada ku wajahay iyada oo sababo aan qoraalka ku sheegi doono lagu soo bandhigay.
Ugu horayn Cristiano Ronaldo ayaa kulankii ugu horeeyay ee bixitaankiisa looga hadlayay waxa uu ku qaatay guriga wakiilkiisa Jorgen Mendes markii ay taariikhdu ahayd May 2017, waana sanad ka hor markii uu Bernabeu ka dhaqaaqay wuxuuna markaasba Ronaldo doonayay in uu Real Madrid ka baxo sida xogta warkan cusub lagu sheegay.
Cristaino Ronaldo ayaa shirkii guriga Jorgen Mendes uu kula qaatay wakiiladiisa, qareenadiisa iyo lataliyaashiisa waxa uu ku yidhi: “Waxaan sheegay in aanan doonayn wax halis ah” wuxuuna tixraaciyay kiiska cashuur lunsiga ah ee waqtigaas lagu soo eedeeyay.
Wuxuuna Ronaldo shirkii guriga Mendes ka hadlayay uu doodiisa ku sii daray: “Anigu maan daraasamayn isla markaana waxa kaliya ee aan noloshadya qabtay waa ciyaarista kubbada cagta, laakiin anigu doqon ma ihi, mana jirto qof aan aaminayaa”.
Intaa kadib El Mundo ayaa soo bandhigay hadalkii Ronaldo uu u sheegay la taliyaashiisa iyo dadka kale ee ka agdhaw ee kiiskii cashuur lunsiga ahaa wuxuuna yidhi: “Taasi waa sababta aan markasta u bixiyo boqolkiiba 30% in ka badan inta ay dalbadeen marka aan shaqaalaysiyo qiimeeyaha, waxay sababtu tahay in aanan dhibaato doonayn”.
Intaa kadib waxaa hadalka qaatay qareenka Cristiano Ronaldo ee Carlos Osorio wuxuuna u sheegay in uu isagu masuul ka yahay kiiskiisa isla markaana ayna jirin sabab uu uga walwalo wuxuuna u sharaxay in uu bixiyay lacagta lagu haysto.
Dhawr bilood kadib Ronaldo ayaa shir kale la qaatay la taliyaashiisa wuxuuna kula dhacay cadho wayn isaga oo u sheegay: “Anigu waligay maan sheegin in aan cashuurta la bixin, waxaan doonayaa in aan ogaado wixii dhacay, anigu waxba ma fahmayo, maadaama oo ay shirkadaha lala shaqeeyo waajib ku tahay in ay cashuurta bixiyaan, sidaa daraadeed, maxay aniga iigu eedaynayaan”.
Laakiin markii xaaladu sii socotay ee Ronaldo maxkamada la soo taagay waxa uu ugu danbayn si hoose u ogolaadya in uu bixiyo lacagta lagu soo eedeeyay in uu lunsaday ayuu Ronlado filayay in kooxdiisii hore ee Real Madrid ay qayb ka bixinayso lacagtan ama ay u soo bandhigi doonto heshiis cusub si dhibaatada dhaqaale ee soo gaadhay ay uga gacan qabto wuxuuna aaminsanaa in heshiiskii Barca ka saxiixatay Messi oo kale uu qalinka ku duugo.
Laakiin sida warbixintan cusub lagu shaaciyay Real Madrid ayaa ka gaabisay doorkii uu Ronaldo doonayay waxayna sidoo kale iska fogeeyeen kiiska maxkamadeed ee Ronaldo wuxuuna Ronaldo dareemay in aanu wax garab ah ka haysan kooxdiisii Madrid taas oo keentay in cadho wayn uu sii qaaday Ronaldo.
Ronaldo ayaa u arkay in Real Madrid ay ixtiraam daro ugu muujisay in ay iska fogaysay kiiskiisa maxkamadeed isla markaana ay soo hordhigi wayday heshiiskii uu ku doonayay in uu Lionel Messi mushaar ahaan kula sinmayay taas oo xaalada sii xumaysay.
Laakiin xaalada Cristiano Ronaldo ee Real Madrid ayaa markale sii xumaatay markii uu Zinedine Zidane agaasimayaashiisii Real Madrid uu ka dalbaday in ay iyagu xaliyaan muskilada Ronaldo ee maxkamada isla markaana uu ka joojiyo hadal haynteeda qolka labiska kooxda taas oo Ronaldo cadho kale ku sii abuurtay.
Waxaana warbixinan cusub ee dheer lagu sheegay in sababta kale ee uu Ronaldo ugu cadhaysnaa Madrid ay ka mid ahayd in markasta laga horaysiinayay Alfredo Di Stefano wuxuuna u arkayay in isagu yahay xidigii abid ugu fiicnaa taariikhda Real Madrid.
Sida xogta warkan lagu sheegay waxa uu Ronaldo oo arinta Alfredo Di Stefano ka cadhaysani uu yidhi: “Markasta waxay aniga iga danbaysiinayaan Di Stefano, anigu ma garanayo wax ka badan oo ay waajib igu tahay in aan sameeyo”.
Dhamaan waxyaabahan oo isbiirsaday waxa uu Ronaldo go’aan ku gaadhay in uu iskaga baxo Real Madrid iyada oo waliikiisa Jorge Mendes uu xidhiidh la sameeyay Juventus taas oo ay Real Madrid iyaduna fududaysay qaabkii uu kooxdeeda uga baxay maadaama oo ayna haysan dalab kale oo ay Juventus la tartansiiso.